Amahlathi azoba nesikhathi esinzima ukuvuselelwa ngemuva komlilo ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngokwanda okuqhubekayo kwamazinga okushisa, imililo yehlathi ngesikhathi sasehlobo iba namandla kakhulu okudala ukuthi amahlathi abe nobunzima obukhulu ukuvuselela Njengoba, kungezona nje kuphela ukuthi izitshalo zinezinkinga zokuhluma, kodwa futhi zithinta nezilwane ezihlala kuzo ngendlela ekhathaza kakhulu, ngokusho kocwaningo olushicilelwe kumagazini i-PLOS ONE.
Kepha hhayi lokho kuphela, kodwa umthelela womuntu emvelweni unjengokuthi ukugawulwa kwezihlahla kungashintsha indawo yokuhlala.
Ababhali besifundo, phakathi kwabo kukhona abacwaningi uRoger Puig-Gironès, oyilungu leqembu le-Animal Biology le-University of Girona (UdG), noPere Pons, we-Forest Technology Center of Catalonia-Center for Ecological Research and Forestry Applications ( CTFC-CREAF), usho lokho Ukuguquka kwesimo sezulu kudala izinkinga ezinkulu emahlathini ngemuva komlilo.
Imvamisa, imililo yizinto zemvelo ezikwazi ukuvuselela amahlathi. Eqinisweni, kunezinye izitshalo ezingamila kuphela ngemuva kokufakwa emazingeni okushisa aphezulu, njengoba kwenzeka kumaProteas ahlala e-Afrika ngokwesibonelo.
Nokho, Lapho lesi simo senzeka esifundeni lapho amazinga okushisa enyuka kuphela, okwenza inhlabathi yome kakhulu, ihlathi alikwazi ukuvuseleleka kalula njengakuqala, futhi kuncane uma umuntu ekuvimbela ngokusika izihlahla ukutshala izindlela zokulima noma ukwakha.
Ukufinyelela kulesi siphetho, abacwaningi benze ukuhlaziywa ngamasampula angaphezu kuka-3000 ezinyoni kanye nohlaza oluvela ezindaweni ezingama-70 ezashiswa eCatalonia ukuthola ukuthi ukwanda komswakama kuthinte kanjani ukuvuselelwa kwehlathi ngemuva komlilo. Ngakho-ke, bakwazi ukuthola ukuthi lokhu kwanda kuthinta kabi ukubuyiselwa kwezitshalo nokwenyoni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Amahlathi azoba nobunzima obuningi bokuzivuselela ngemuva komlilo ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu
Ama-nzalo amasha azovela ngokufudumala komhlaba